630mm ịkwanyere Pipe extrusion Line Na Egypt
site ha na 18-05-16
N’ọnwa Mee, ndị injinia Grace bịara n’Osimiri Naịl mara mma ka ha mezie ma mepụta ụzọ abụọ a ga-esi nweta ọkpọkọ PVC 315-630mm. Mmepụta akara mejupụtara counter-adiana ewepụghị ejima-ịghasa extruder, a agụụ igbe, a ịgba igbe, a traktọ, a ọnwụ igwe, na a flaring igwe; unit nwere pụrụ ịdabere na p ...
Industrylọ ọrụ mmepụta ihe nke Iraq
site ha na 17-05-21
Nke a bụ nnukwu ọrụ nke Ngalaba Mmepụta nke Iraq. Maazị Manhal Aziz Al Khabaz, Mịnịsta nke Ngalaba Mmepụta na Mkpụrụ nke Iraq, na Ahmed Hussain, Director nke SCCI gara mmemme mmeghe nke Grace Pipe Equipment. Dr. Hussein Muhammad Ali, onye ndụmọdụ gbasara Mi ...
Logo ohuru, onyonyo ohuru
site ha na 17-03-21
GRACE sitere na Jiangsu China, ma na-eme ka mmepe ụwa dum n'uche. Na-elekwasị anya na plastic extrusion na imegharị ihe maka iji ngwa n'ichepụta ihe, GRACE bụ akụrụngwa soplaya tụnyere imewe, R&D, mmepụta, ahịa na ọrụ. GRACE NEW LOGO di na nkwalite nke ebube, imeghe ne ...
Akụrụngwa ahụ nke ọma nabatara Total
site ha na 16-12-21
Na nso nso a, ahaziri profaịlụ TPE Extruder maka TOTAL si France na-aga nke ọma. N'oge ule oge, ndị ọrụ nyocha na-enwe afọ ojuju maka ogo akụrụngwa ahụ, ka ọ dị ugbu a, na-eto njiri mara ma na-arụ ọrụ dị oke mma, arụmọrụ dị elu arụmọrụ, ikike teknụzụ o ...